Midowga Yurub oo cunaqabatayn saaray shirkadda diyaaradaha ee ku lug leh ka ganacsiga muhaajiriinta Belarus
HomeWararka CaalamkaMidowga Yurub oo cunaqabatayn saaray shirkadda diyaaradaha ee ku lug leh ka ganacsiga muhaajiriinta Belarus
November 12, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Midowga Yurub ayaa sare u qaadaya dadaallada lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta aan joogtada ahayn ee isku dayaya inay ka soo galaan Midowga Yurub dhanka Belarus. Shirkadaha duullimaadyada ee ku xira Minsk meelaha ay u socdaan ee Bariga Dhexe waxay noqon karaan bartilmaameedka tallaabooyinka ciqaabta ee Midowga Yurub.
Midowga Yurub ayaa ka fiirsanaya in liiska madow lagu daro shirkadaha diyaaradaha ee ku lug leh keenista muhaajiriinta Belarus, Madaxa Komishanka Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay Isniintii ka dib markii xiisadaha ka taagan xuduudka Poland iyo Belarus ay sii xoogeysatay.
Isniintii, dhowr boqol oo muhaajiriin ah ayaa xoog ku galay xadka Poland , iyaga oo isku dayaya in ay jabiyaan xayndaab silig ah oo u dhow isgoyska Kuźnica ee xudduudda Belarus iyo Poland oo ay galaan dhulka Midowga Yurub. Iyaga oo ka jawaabaya, mas’uuliyiinta Midowga Yurub waxay kordhinayaan tallaabooyinka looga hortagayo soogalootiga inay yimaadaan Minsk.
“Midowga Yurub wuxuu… sahamin doonaa sida loo cunaqabateeyo, oo ay ku jirto liiska madow, shirkadaha diyaaradaha ee dalka saddexaad ee firfircoon ka ganacsiga dadka,” Ursula von der Leyen ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay Isniintii.
Laba wakiil oo sare oo ka socda Midowga Yurub, Josep Borrell iyo Margaritis Schinas ayaa lagu wadaa inay u safraan dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan iyo tahriibayaasha — Armenia, Masar, Iraq, Jordan, Lebanon, Turkey, iyo Imaaraadka Carabta. Hadafka ayaa ah “in la hubiyo inay u dhaqmaan si ay uga hortagaan muwaadiniintooda inay ku dhacaan dabinka ay dejiyeen mas’uuliyiinta Belarus,” ayuu yiri von der Leyen.